Afjarno aad Samsung Galaxy S5 waxay leedahay faa'iidooyin badan oo dadka isticmaala. Haddii aad is-weydiinayaan waxa uu waxtarayaa laga yaabaa in aad ka hesho si guul soo afjarno aad Galaxy S5, halkan waxa rooting samayn kartaa telefoonka Samsung.
Afjarno kuu ogolaanaya in aad ku rakibi Custom Recovery, Custom ROM, kernels iyo Mods.
Xirxiro boosba kuu ogolaaneysaa in aad si aad u hesho inta badan ka soo qaadaan aad Galaxy S5
Waxay sidoo kale u oggolaadaan in aad si kor loogu qaado wax-qabadka ee Galaxy S5.
Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay si fudud ku rakibi barnaamijyadooda ka Store ee Play Google taas oo u baahan inaad hesho xididka inta aysan qaadan wax ka mid ah waxa ku jira ee dukaanka.
Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in ay jiraan waxyaabo badan oo aad u baahan tahay si ay u bartaan si ay si guul leh rujin aad Samsung Galaxy S5. Mid ka mid ah kuwaas oo ay u badan tahay waxa ugu muhiimsan ee ka mid ah waa in aad u baahan doontaa inaad ugu horreeya oo dhan dib u kor ku qoran ee aad telefoonka. Nasiib wanaag idiin, waxaad u samayn kartaa si aad u fudud oo isticmaalaya Wondershare MobileGo in hal click. Bal aynu eegno sida loo sameeyo.
Back aad Data isticmaalaya Wondershare MobileGo
Ugu horreeya oo dhan Waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo iyo rakibi Wondershare MobileGo software si aad u computer. Marka waxa la bixi, oo aad hadda diyaar u yihiin in ay bilaabaan nidaamka taageerto ilaa aad Samsung Galaxy S5.
Talaabada 1: Orod Wondershare MobileGo ka dibna xiriiriyaan Samsung Galaxy S5 in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Software waa in ay aqoonsadaan telefoonka. Taas macnaheedu waa in aad ku aragto waa in magaca aad loo xilsaaray qalab aad u muuqdaan shaashada guriga.
Talaabada 2aad: In uu furmo suuqa hoose, guji "kaabta One-click" si aad u bilowdo.
Talaabada 3: Waxaad arki doontaa wax gurmad suuqa kala muuqan. Daaqadda waxan oo dhan ka mid ah waxyaabaha ku saabsan telefoonka in lagu taageeray kartaa si toos ah loo doortay doonaa. Haddii aad rabto in aad dib u walba ee aad taleefan, markaas ka tago wax walba hubiyaa sida ay tahay. Haddii kale, uncheck sanduuqyada ku jira aanad rabin in ay dib u up.Step 2: In uu furmo suuqa hoose, guji "kaabta One-click" si aad u bilowdo.
Talaabada 4: Tallaabada xigta ku lug doorashada Jidka file ee files gurmad ah. Wondershare Dooran doonaa si loo badbaadiyo files ee folder la odhan jiray C / Users / Maamulaha / Documents My / Wondershare / MobileGo / kaabta. Haddii aad ku faraxsan tahay jidkaa waa ka dibna riix kaabta si aad u dhamayso gurmad ah. Haddii aan, Riix Browse ka dibna dooran meel ka doorteen. Riix kaabta marka loo sameeyo.
Waxaa muhiim ah in aad telefoonka ku xiran inta ay socoto oo dhan.
Hadda oo xogta aad si ammaan ah oo taageeray oo la soo celin karin wakhti kasta, waa wakhtigii la idin saari Samsung Galaxy S5. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah hababka ugu caansan inay sidaa sameeyaan. Waxaan ku qeexan ugu fiican si aad mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ku haboon baahidaada dooran kartaa.
Hababka Popular ayaa si xididka Samsung Galaxy S5
1. Laba Methods in aad si fiican u shaqeeyo
Maqaalkani waxa uu bixiyaa tallaabo cad hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo xidid aad Galaxy S5. Si ka duwan dadka kale ee laga yaabo in aad ka heli online, waa ma caddayn mana dhiman macluumaadka. Waxay ku siin doonaa laba hab oo kala ah hab CMW Root xidid Habka CF Auto ah. Labada of habkan waxaa si fiican u sharxay in maqaalka sidaa darteed waa in aad ka heli iyaga u fudud in ay hirgeliyaan oo ka rujin aad Samsung Galaxy S5 aad u fudud.
Tool: Oden, soo kabashada Philz Touch CWM iyo SuperSU.
Review: Labada habab waxay shaqayn doonaan. Laakiin ka sii muhiimsan, maqaalka ayaa si weyn u fududeeyey hababka sida in aad fulin karo tallaabo ficil ah sida aad u akhriyi. Maqaalka xitaa tagaa sidii ay uga jawaabay qaar ka mid ah su'aalaha aad ka qabto hababka. Just in loo diyaar garoobo Read dheer, in ay u badan tahay ma laga yaabaa in lagu caawiyay sidii labada hab waa wax yar oo ku lug leh.
2. xidid Your Samsung Galaxy S5 in 20 seconds
Maqaalkani waa mid kale oo weyn. Wuxuu ku siinayaa tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo rujin aad Galaxy S5 in ka yar 20 ilbiriqsi (maragooda, ma annagaa leh).
Review: Marka aad hesho si aad talaabooyinka, waa ay fududahay ah in la akhriyo oo laga waa sahlan tahay in la fuliyo. Video waxay ahayd Intaa waxaa dheer soo jiidata kuwii lahaa halkii aan maraan kaaftoomi ee akhriska oo dhan tallaabooyinka.
3. afjarno Galaxy S5 on Android 4.2.2 KitKat
Maqaalkani waxa uu bixiyaa tutorial ah in ugu horayn ay diiradda la isticmaalayo xirmo CF-Auto-Root iyo Oden. Si fudud waxaad ka akhrisan doono tutorial ku sahlan tahay in la raaco tallaabooyin ay sidoo kale waa mid aad u fudud in ay fuliso.
Tool: CF-Auto-Root xirmo
Review: Waa si caddaalad ah u fudud in ay ka aqristay wargayska qoraal bixiya hab arrintaasna waa u fududahay in ay fuliso iyo in sidoo kale ka shaqeeyaa si aad u wanaagsan. Waa akhrin sahlan oo xanuun ah ma laha in ay ka yimaado goobta xujo.
4. Sidee si fudud rujin Samsung Galaxy S5
Tagaa Maqaalkani waxa uu galay si faahfaahsan oo ku saabsan sida in ay ka faa'iideystaan ​​xirmo CF-Auto-Root in rujin Samsung Galaxy S5. Waxay bixisaa fududahay in la raaco tallaabooyinka ay tahay in loo sameeyo waa mid aad u fudud in la sameeyo soo afjarno guul.
Review: iyagoo go caan ah in website dhibaatooyinka technology ugu, Laptopmag ayaa fududeeyey tutorial si ay u fududahay qof si fudud u raaci.
5. sahlan si ay rujin Samsung Galaxy S5
In kasta oo xaqiiqda ah in ay tahay maqaal aad u faahfaahsan, waxa ay bixisaa hab lagu saari aad Galaxy S5 in laga yaabo in aad si fiican u heli aad u faa'iido badan.
Review: Ma aha maqaal sahlan loo akhriyi karo sida ay tahay mid aad u faahfaahsan, laakiin waxa aanu qaban shaqo oo ay u badan tahay in ay bartaan wax badan ayay ka iyo sidoo kale aad.
Si fudud Dhoofinta / Import CSV Xiriirada ka iyo in ay Android Phones
> Resource > Android > Sida loo xidid Samsung Galaxy S5 in One Click